‘तपस्वी’ भनिएका बम्जनको आश्रममा प्रहरीको छापा, अनुयायी सञ्चलालको हत्यापछि गाडिएको स्थान खोज्दै प्रहरी ! « News24 : Premium News Channel
‘तपस्वी’ भनिएका बम्जनको आश्रममा प्रहरीको छापा, अनुयायी सञ्चलालको हत्यापछि गाडिएको स्थान खोज्दै प्रहरी !
सिन्धुपाल्चोक । ‘तपस्वी’ भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रममा प्रहरीले छापा मारेको छ ।
जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बमजनका चेलाहरु बस्दै आएको इन्द्रावती गाउँपालिका–६ बाँडेगाउँस्थित टोड्के जंगलमा रहेको आश्रममा फरेन्सिक विज्ञसहितको प्रहरी टोलीले छापा मारेर खोजतलास थालेको हो । प्रहरी बमजनका एकजना अनुयायीको हत्यापछि गाडिएको स्थानको खोजीमा छ ।
बमजनका अनुयायीमध्ये एक नुवाकोटका सञ्चलाल वाइबा बाँडेगाउँकै आश्रमबाट बेपत्ता भएको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । रामबहादुर २०७१ असोज पहिलो सातादेखि ६ महिनासम्म बाँडेगाउँको आश्रममा बसेका थिए ।
सञ्चलालको सोही आश्रममा हत्या गरी गाडिएको अनुमानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार बमजनका अर्का अनुयायी सुरेश आले पनि यही आश्रमबाट हराएका थिए । त्यसैगरी आनीद्वय डोल्मो र चुन्मा पनि बाँडेगाउँकै आश्रमबाट बेपत्ता भएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजी थालेको हो ।